UNkulunkulu Nokungokomoya - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya
Ukukhanyiselwa ukuvuma ngokugcwele komphefumulo womuntu. Kufana nokukhanyisa isibani umuntu anakho kakade ngaphakathi kuye. Indlela eya ...
Kuyini ukuvuka ngokomoya?
Kungani abantu bedideke kangaka uma kukhulunywa ngoNkulunkulu?
Isigaba - uNkulunkulu Nokungokomoya
Ingabe uNkulunkulu ubangela ukuhlupheka?
Kungani kukhonzwa onkulunkulu abehlukene?
Ingabe akulungile ukuthukuthela uNkulunkulu?
Kungani uNkulunkulu esebenzisa izimangaliso kancane kangaka?
Yini uNkulunkulu ayilindele ngokuphila?
Ingabe ikhona indlela yokuvuza u-Ego?
Ingabe ukweqisa kunenjongo ekuphileni?